I-Arrakis phakathi kwezindunduma - I-Airbnb
I-Arrakis phakathi kwezindunduma
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Joe
I-Arrakis yikhaya elinamakamelo okulala angu-3 aphakeme phakathi kwezindunduma zesihlabathi ze-Dolphin Sands. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela kuma-balcony kuzo zonke izindawo zesihawu, okukuvumela ukuba uthathe indawo enhle kakhulu ye-Great Oyster Bay, intaba yama-Hazards, i-Swan River kanye nendawo ezungezile ye-dune. Amafasitela amakhulu aphansi kuya kusilingi egumbini lokuphumula anikeza ushintsho kusuka kulawa ma-balcony abe isakhiwo esinekhishi nendawo yokudlela evulekile.
I-Arrakis ayikho ngokuphelele kugridi, isebenzisa amandla elanga, ukushisisa igesi, amanzi ethangi kanye nesistimu yokuthunga elawulwa wena. Kucelwa ukuthi izivakashi zikhumbule lokhu phakathi nokuhlala kwazo.
Amakamelo okulala aqukethe umbhede omkhulu, umbhede omkhulu kanye nombhede omkhulu kabili. Indawo yokuhlala iqukethe amasethi amabili ezindawo zokuphumula, ikhishi elivulekile lohlelo, i-heater yegesi kanye nohlelo lwefenisha yangaphandle ene-BBQ. Awekho omakhelwane abaseduze, abakunikeza ubumfihlo obugcwele kuma-balcony nalapho uhlola ukuhambahamba ezindundumeni.
4.72 · 39 okushiwo abanye
I-Dolphin Sands iyindawo ende eminyene enyakatho ngasemfuleni we-Swan futhi onqenqemeni lwayo oluseningizimu, i-Great Oyster Bay. Indawo yokuhlala ingenye yezindunduma ezinesihlabathi enezitshalo ezincane futhi igcwele izilwane ezihlukahlukene zasendaweni, okuhlanganisa izindawo zokuhamba ngezinyawo nempahla. Eduzane nendawo yokuhlala yi-Oyster Shack edume kahle, lapho ungazama khona amanye ama-oyster amahle kakhulu ase-Tasmania. Cishe imizuzu engu-15 ukusuka ngemoto yidolobha lase-Swansea. I- kumelwe ibonwe ngenkathi isendaweni yi-Wine Glass Bay eyaziwayo emhlabeni kanye nemizila ehlukahlukene yokuqwala izintaba ezungeze i-Freycinet Peninsula.
Izivakashi zingangena endlini zisebenzisa isistimu yebhokisi lesikhiye, kodwa ngizotholakala ukusiza uma kudingeka.
Inombolo yepholisi: DA 2020/162